Keating oo ka hadlay Doorashada Soomaaliya | Baydhabo Online
Keating oo ka hadlay Doorashada Soomaaliya
Ergayga Gaarka ah ee Qaramada Midoobay Mr. Michael Keating oo hadal ka jeediyey furitaanka shirkii Madasha Wadatashiga Qaran ee xalay saqdii dhexe lagu soo gaba gabeeyay Magaalada Muqdisho ayaa waxa uu ka hadlay Doorashada Soomaaliya.
Ugu horey Michael Keating ayaa bogaadiyay Hogaamiyeyaasha Madasha Wadtashiga Qaran, waxaana uu ku amaanay qaabka ay u dar dar gelinayaan Doorashooyinka Soomaaliya, sidoo kalena ay ku dadaalayaan sidii Doorashada aysan u dhaafi laheyn sanadkan 2016-ka.
Sidoo kale Keating ayaa u mahadceliyay Gudiyadda Doorashooyinkka heer gobol iyo heer Federal sida habsamidda leh ay u fuliyeen howlaha Doorashooyinka Dadban.
Ergayga Gaarka ah wuxuu mar kale Madasha u xaqiijiyay in Beesha Caalamku ay diyaar ula tahay taageero buuxda kuna dadaali doonaan in waxa walba waqtigeeda lagu bixiyo.
Michael Keating Ergeyga gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya ayaa markale walaac ka muujiyay Amniga Musharaxiinta u tartamaya Madaxtinimada Soomaaliya, waxaana uu Hay’adaha Amaanka ugu baaqay in ay sugaan Amniga Musharaxiinta.
Soomaaliya waxa ay galaysaa waqti kala guur ah waxaana Magaalada Muqdisho iyo Gobolada Dalka ka socda Doorashooyin.